IINGCAMANGO ZEBHENCH SHOWER (EYAKHELWE NGAPHAKATHI KUNYE NOYILO OLUZIMELEYO) - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Iingcamango zeBhench Shower (eyakhelwe ngaphakathi kunye noyilo oluzimeleyo)
Iingcamango zeBhench Shower (eyakhelwe ngaphakathi kunye noyilo oluzimeleyo)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu sokugqibela sokuhlamba izimvo zebhentshi kubandakanya iindlela ezahlukeneyo zoyilo kwigumbi lakho lokuhlambela.
Ibhentshi yeshawari inokuza kuyilo olwahlukeneyo enjengebhentshi eyakhelwe-ngaphakathi, isihlalo sokusonga okanye isitulo setiak ephathekayo ukongeza ukusebenza ngakumbi kwindawo yakho yangasese. Izihlalo zokuhlamba zinokubonelela ngendawo yokucheba imilenze yakho kamnandi, ukunceda ukugcina izinto zangasese zifikeleleka okanye ukubonelela ngendawo yokuhlala nokuhlaziya.
Sele kuyinto ethandabuzekayo kwezi ntsuku ukuba neshawa kunye nebhentshi eyakhelweyo. Ngokungafaniyo neendlela ezininzi, iibhentshi zeshawari zinenzuzo yokusebenza ngakumbi kunee-aesthetics. Ukongeza ibhentshi kwandisa ukhuseleko kwindawo yakho yokuhlamba. Oku kuluncedo ngakumbi kubantu abakhubazekileyo nakubantu abadala, njengoko kunciphisa amathuba okuba ngempazamo batyibilike kwindawo yokuhlamba.
Ukuba ayisiyiyo inkxalabo kuwe, ibhentshi leshawa likwaqinisekisa ukuba ufumana iseshoni yokuhlamba. Kunzima ukufikelela kwiindawo ezinjengemilenze kunye neenyawo zakho kuya kuba lula ukuhlamba ngokufanelekileyo ukuba unebhentshi yokuhlala. Ukungathethi, kunciphisa nethuba lokutyibilika kwishawa.
Izimvo zeBench zeShower ezakhelweyo
Iingcamango zeBhentshi yokuhlamba iileyili
I-Bench Shower Bench
Ibhentshi lokuhlamba iQuartz
Hamba ngokuhlamba ngeBhentshi
Ibhendi yokuhlamba edadayo
Ibhentshi yokuhlamba yangoku
Wall Onyuswe Shower Bench
Usonge Ibhentshi Shower
Ibhentshi yokuhlamba ephathekayo
Ibhentshi yokuhlamba ezonyango
Ibhentshi yokuhlamba iinkuni
I-Teak Shower Bench
Ukuba ufuna ukufaka okanye ukongeza ibhentshi lakho lokuhlamba, ziqwalasele ezi zinto:
Ngubani oza kusebenzisa ibhentshi? Ngaba baneemfuno ezizodwa okanye imiba yokuhamba? Luluphi ubude obuphakathi bomsebenzisi / abasebenzisi balo?
Ummandla wesicelo - unendawo engakanani kwaye yintoni indawo yeshawa yakho.
Ngokuqwalaselwa kwezi zinto zingasentla, uya kukhokelwa kwisigqibo sakho kwisilinganisi esifanelekileyo sebhentshi. Ukuba akukho namnye kubasebenzisi onemicimbi yokuhamba, kwaye bonke bangabantu abadala, indawo yokuhlala esemgangathweni eyi-15 ukuya kwi-19 iya kusebenza kakuhle, kuxhomekeke kubude obuphakathi kwabasebenzisi bayo. Kungcono ukuzama ngokwakho ukuba yeyiphi efanelekileyo.
Nangona kunjalo, ukuba unabantwana / abantwana abancinci, zama ukuyigcina iphantsi ngokwaneleyo ukuze behle ngokukhuselekileyo. Ngokubanzi, ukuphakama kwesihlalo se-18 ″ kuya kuba kokukhululekileyo kuninzi, ngokwemigangatho ye-ADA. Ngobunzulu besihlalo, kulunge kakhulu ukuyigcina phakathi kobunzulu bebhentshi ye-ADA, phakathi kwe-18 ukuya kuma-24 ″. Kwakhona, qwalasela ubungakanani bomzimba kunye nenqanaba labasebenzisi xa kumiselwa ubunzulu bebhentshi.
Kuxhomekeka kubungakanani beshawa yakho, zininzi iindlela ezahlukeneyo zokuhlalisa izitayile onokukhetha kuzo.
Ibhentshi leshawa elinethayile - Eyona ilula kunye neqhelekileyo. Oku kulula ukwakha ngekhonkrithi, ngakumbi ukuba awukayifaki ithayile kwindawo yakho yokuhlamba. Olu lukhetho lwabo bafuna ukugcina izitulo zabo zingabonakali.
Marble / Stone Shower Bench -Ngokufanayo nakwibhentshi leshawa elineethayile, olu hlobo lufakwe kakuhle ngaphambi kokuba ugqibe ukuthambisa indawo yokuhlamba. Umahluko kuphela phakathi kwabo zizinto ezisetyenzisiweyo.
Ibhendi yokuhlamba edadayo -Ikhovane yentsimbi yenziwa ngekhonkrithi, emva koko yanxitywa iithayile okanye amatye endalo ukwenza into edadayo. Oku kungcono xa ufuna ibhentshi lakho lokuhlambela libukeke lilula kwaye lilula.
Ibhentshi yokuhlamba eludongeni -Ukuba sele uneetayile ezifakiweyo, mhlawumbi isitolo esithengiweyo okanye ibhentshi yesiko lokuhlambela eludongeni liya kusebenza ngcono. Ukuba umfutshane kwisithuba, oku kuya kusebenza kakuhle, njengoko unokuthenga ibhentshi yohlobo lokuhlambela.
Ibhentshi lokuhlamba elizimeleyo - Olu didi lubandakanya izitulo ezenziwe ngomthi nezeplastiki kunye neebhentshi onokuzibeka kwindawo yakho yeshawari, kunye nezitulo zeeshawari ezikhethekileyo zee-PWDs.
Ibhentshi yethayile yethayile ibekwe apho kukho udonga lwentloko yeshawari, eyindawo engaqhelekanga yeebhentshi zeshawari, kodwa ikwenza ingqiqo ngokujonga ubude bebhabhathi yeshawa. Iithayile ezisetyenziswe ebhentshini zingqamana neendonga, ziyenza ibonakale icocekile kwaye ingenamthungo.
Igumbi lokuhlambela linokulingana ngokobukhulu. Ubume phantse besikwere buvumela indawo eyaneleyo yebhentshi yethayile yeshawari kwelinye icala. Kuba isecaleni kwentloko yeshawa enkulu, ishawa esisezantsi, yefowuni yafakwa ecaleni kwebhentshi ukulungiselela ukufikelela.
Ukutshatisa inkangeleko entle yegumbi lokuhlambela, ibhentshi leshawa elisetyenziswe kwigumbi lokuhlambela elincinci aligcini nje ngokubhinqa iithayile ezihambelana neendonga, kodwa lifakwe ngegranite emnyama ukumelana nekhawuntari yamampunge. Oku kudala ukujonga okumanyeneyo kwendawo yonke.
Omnye umzekelo webhentshi yeshawari yethayile ephezulu yelitye. Le ishawa inkulu kwaye ibanzi, ke ibhentshi yeshawa nayo inzulu kakhulu kwaye ivumela indawo eyaneleyo yokuma komzimba.
Kuba le ishawa ikwicala elincinci, ibhentshi leshawa lafakwa ithayile kuloo ndawo lifihla udonga.
Le bhentshi yethayile yethayile isebenzisa iithayile zeceramic ezimnyama endaweni yeetayile eziqhelekileyo ezinemibala ekhanyayo, inika isibheno esahlukileyo, sangoku.
Endaweni yokudityaniswa ngokupheleleyo kweethayile, eli gumbi lokuhlambela longeza udonga ngeetayile ze-mosaic zokwenza indawo ekugxilwe kuyo kwisithuba esincinci-eludonga apho ibhentshi yeshawari yakhelwe khona. Ibhentshi yeshawari ine-shower-mount head-shower shower, eyenza kube lula ukuhlamba, nokuba uhleli.
Iindonga zeli gumbi lokuhlambela zisebenzisa iithayile ezenziwe ngombala ongwevu kuyo yonke indawo-kwanebhentshi leshawa elincinci linxibe iithayile ezifanayo. Kodwa ngenxa yeethayile zomgangatho okhanyayo, umahluko okhaliphileyo phakathi kwale mibala mibini wenza uzibonakalise wedwa.
izimvo zesikhumbuzo seminyaka emi-2
Le bhentshi yeshawari yethayile yeshawari engenamthungo yokudibanisa ngaphandle kodonga lweli gumbi lokuhlambela, njengoko isebenzisa iithayile ezifanayo zemarble njengodonga. Oku kwenza ukujonga okucocekileyo nokungabinamthungo kule ndawo yokuhlambela intle.
Kuyafana nomzekelo wangaphambili, oku Uyilo lweeshawa zemarble isebenzisa iithayile zemabhile ezifanayo kwibhentshi kunye neendonga. Kodwa endaweni yesilayidi esipheleleyo sekhonkrithi, iyahamba kancinci, ijonge ukubonakala kweesanti ezenza ishawa encinci izive ivulekile nangona ibungakanani bayo.
Iithayile zemabhile ezisetyenziswe kweli gumbi lokuhlambela lembombo zimile kakuhle ngenxa yeethayile ezimnyama ezimnyama ezisetyenziswe kumgangatho wayo.
Abo banqamle kancinci kwindawo yokuhlambela, okanye abo bangafuni nje ukuba ibhentshi leshawa lihlale kakhulu, iibhentshi zeshawari zekona lukhetho olufanelekileyo. Jonga imizekelo engezantsi:
Ngokudibanisa iithayile zemibala kunye nomphezulu omnyama wegranite, le bhentshi yeshawari yekona ihlala isitshixo esisezantsi, ngelixa ikunika indawo efanelekileyo yokuhlala encinci ngexesha lokuhlamba kwakho. Ibhentshi elincinci leshawa linokuphinda kabini njengendawo yokugcina izinto.
Iithayile zodonga lwe-Bold turquoise zisetyenziselwa zombini ezindongeni nakwibhentshini yekona yokuhlambela yekona yegumbi elincinci lokuhlamba. Umphezulu omhlophe oqinileyo wawusetyenziswa ngaphezulu kwawo ukugqiba ngokugudileyo.
Ukugcina ukujonga okucocekileyo kunye nokungenamthungo okwangoku, eli gumbi lokuhlambela lidibanisa kwibhentshi yeshawa yekona kunye neethayile zodonga ngokusebenzisa izinto ezifanayo kunye nokugungqa okuxineneyo.
Jonga le bheki yekona yeenkuni IAmazon
Ukuba ufutshane kwisithuba kwaye awufuni ukwenza okanye ukwakha kwakhona iithayile, ibhentshi yeplanga yokuhombisa ezimeleyo iya kuba lolona khetho lufanelekileyo. Ayisiyo kuphela efikelelekayo ngakumbi, ikwanobunzima kwaye iyahambisa ukuze ukwazi ukuyisusa ngokulula ukuba awuyidingi.
Ukusetyenziswa komphezulu wegranite emnyama kwibhentshi yeshawari ayongezi nje kuphela ukugqibezela, kodwa ikwenza ukuba ibe yindawo ekugxilwe kuyo yendawo.
Kuba iithayile ezisetyenziselwa udonga kunye nomgangatho wale ndawo yokuhlambela zinombhalo, igranite ephezulu yongezwa kwibhentshi lokuhlambela indawo egudileyo, ethe tye.
Iithayile zikaMoses kunye nazo naziphi na iithayile ezincinci ezilinganayo zihlala zingenalo umbono wokuzisebenzisa kwizihlalo zebhentshi yeshawari kuba ubunjani abunakungonwabisi kwaye ukugungqa liphupha elibi lokucoca. Ukuba iithayile zakho zodonga ezikhoyo zincinci, ungongeza nje i-granite ephezulu kwisitulo sebhentshi yeshawari. Ayizukuyenza kuphela ukuba ibe lula ngakumbi, kodwa iya kujongeka ibonakale ngakumbi kwaye ngokuqinisekileyo kulula ukuyicoca.
Ibhentshi yeshawari enezixhobo ezimhlophe ze-quartz kungekuphela nje njengebhentshi, kodwa kwanenkxaso yesiseko sokwahlula iglasi kwindawo yeshawa.
Sele zikhona iithayile kunye neesahlulelo ezifakiweyo? Akukho ngxaki. Usenokufaka ngokulula ibhentshi eqinileyo yokuhlamba i-quartz njengalo mzekelo. Icala elinye kuphela lebhentshi ligxunyekwe kwaye liqhotyoshelwe eludongeni, ngelixa imilenze ye-quartz kumacala omabini inceda ukuxhasa ibhentshi iphela.
Iingcango zekhabhathi zesitayile somsebenzi
Ukuba unebhafu edityanisiweyo kunye nendawo yeshawa, unokugcina ukucoceka nokucoceka kwangoku ngokusebenzisa i-inset, ibhavu eyakhelweyo. Vala indawo ejikeleze ibhafu nge-quartz okanye nayiphi na into oyikhethileyo, kwaye inokuphinda kabini isebenze njengebhentshi leshawa ukuba ilungile ecaleni kwendawo yokuhlambela njengalo mzekelo.
Le ndawo intle yesitayile yeshawari ine-charm ye-rustic kuyo, ngenxa yokusetyenziswa kweethayile zomthi kwibhentshi yeshawari ye-cantilever.
Kwindlela yokutshintsha yangasese, kulula kancinci ukudibanisa ibhentshi yeshawa kuyilo. Kule meko, ibhentshi elizimeleyo elenziwe ngamatye aqinileyo labekwa kwindawo yeshawari ukuze lisebenze njengebhentshi leshawa. Ibhentshi enkulu yamatye yomelele, kwaye ngenxa yobunzima bayo, uyakuqiniseka ukuba iya kuhlala endaweni ngaphakathi kwishawari.
Imisebenzi emininzi ishawa yokuhamba okumnandi ibhentshi njengalo mzekelo iyayenza le ndawo ibe yindawo ekuhlanjwa kuyo ngokongeza iithayile zeglasi embindini. Iishelufu ezisongelweyo kwakhona kukuchukumisa okuhle kuyilo.
Ukwahluka komgangatho weplanga lomthi kunye neethayile ezimhlophe ezibengezelayo kudala ukujonga okulula, kodwa okumangalisayo kwesi sitya sokuhamba.
Ishawari evaliweyo yokuhamba ngaphakathi nebhentshi eyakhelwe-ngaphakathi ngaphakathi. Indawo encinci yokuhlambela inesibheno esihle esineentlobo ezimbini zokutshiza.
Iibhentshi zeshawari ezidadayo, okanye iibhentshi ze-cantilever, zilungile kwiindawo ezincinci nezomeleleyo njengoko zikhangeleka zingenabunzulu. Nayi eminye imizekelo ebalaseleyo:
Ukusukela Uyilo lokuhlambela igumbi lokuhlambela imxinwa, ukufaka ibhentshi lokudada lokudada eliqhotyoshelwe eludongeni kumacala amabini kuphela kunokwenzeka. Ububanzi obunqamlezileyo buqinisekisa ukuba bomelele ngokwaneleyo ukuba bungabamba ubunzima, kwaye ukubuyekeza, ubunzulu obungaphezulu bongeziwe kule bhentshi yeshawari.
Intloko yeshawari yomnxeba yayifakwe ngokufanelekileyo ecaleni kwebhentshi edadayo kunye ne-quartz ephezulu. Ezi ntlobo zezicelo zenza ishawa kube lula kubantu abaneentshukumo ezinqongopheleyo (ii-PWD, abantu abadala, njl. Le yindawo entle yokucoca ngokukhawuleza, njengokucoca ukungcola ezinyaweni okanye kwimilenze yakho.
Ukudibanisa ngokungagungqiyo ezindongeni, le bhentshi idadayo isebenza njengebhentshi kunye nenqwanqwa elincinci lezinto zakho zokuhlamba. Ngenxa yokuba ibhentshi ibibekwe phantsi kwentloko yeshawa, indawo igcinwa yomile ixesha elininzi, kwaye kuba le ndawo incinci ishawa ayinandawo yokuxhoma itawuli edongeni, ungabeka iitawuli zakho kunye neempahla ebhentshini zigcine zomile.
Amagumbi okuhlambela anamhlanje ahlala ecocekile, ekhangeleka kakuhle, kunye nee-silhouettes ezilungelelanisiweyo, ezidityaniswe nezinto zentsimbi. Ukuba ucinga ukuba iibhentshi zokuhlamba zijongeka njengesikolo esidala, apha ngezantsi kukho imizekelo yokudibanisa iibhentshi zeshawari kulwakhiwo lwangoku lokuhlambela:
Ukulula yinto ephambili kule ndawo yokuhlambela yanamhlanje. Iqukethe iileyili ezimhlophe zeceramic kuzo zonke iindonga, zidibaniswe ne-grey terrazzo imigangatho yokuthungwa kunye nephethini. Kwabekwa ibhentshi lokudada emanzini, kwaye lalinxitywe kwiithayile ezifanayo ezazisetyenziswa eludongeni, zisenza sibonakale ngathi sifihlwe kakuhle.
Ngamanye amaxesha, eyona ndlela ifanelekileyo yokuzifihla ikwindawo ecacileyo- kwaye le ndawo yangasese emhlophe emhlophe ibonisa indlela yokwenza ngokuchanekileyo. Ukulandela ukumila okungafaniyo kweendonga, ibhentshi yeshawari iyadibana ngokungathi yayiyinxalenye yeenkcukacha zokwakha indawo yeshawari. Iglasi enkulu ishawa ngo idibana nesahlulelo seglasi ukugqibezela uyilo oluhlengahlengisiweyo.
Eyakhelwe ngaphakathi kwisahlulo esiphantsi seshawa, le bhentshi ye-quartz-topped shaft iba yindawo ekugxilwe kuyo kwindawo yokuhlamba.
Eminye yemibono yebhentshi yokuhlambela yezo zihambelanayo ezinjengodonga olubekwe eludongeni olusongwayo xa lungasetyenziswa. Ezona zincinci zoyilo zokuhamba zihamba nge-30 ″ nge-30 ″. Ikhowudi yokuHlala yaMazwe ngaMazwe iyalela ukuba iishawari okungenani zibe zii-intshi ezingama-900 okanye ama-30 ″ ngama-30 ″ ukongeza ngokufanelekileyo isihlalo seshawa esakhelwe ngaphakathi. Ukuba uneshawa esilingana nale okanye inkulu kodwa ayinkulu ngokwaneleyo ukuba ungalalisa kakuhle ibhentshi eliqhelekileyo imodeli yokusonga inokusebenzela indawo yakho.
Jonga le teak yokusonga isitulo sebhentshi IAmazon
Olunye ukhetho lokonga indawo ngakumbi lweebhentshi zokuhlamba luza kuba ziibhentshi zeshawari ezixhonywe eludongeni. Ezi zinokuthengwa ezivenkileni okanye kwi-Intanethi, kwaye zinokufakwa ngokulula kumagumbi asele ekhona, okoko nje kukho udonga lokuncamathela kulo. Ezi zitulo zisezantsi kwaye zinokusongwa, ukuze ube nokuzibeka ngokulula xa ungazisebenzisi.
Okuqhotyoshelwe eludongeni, le bhentshi isongwayo yindibaniselwano yentsimbi eyenziweyo yentsimbi kunye nomthi we teak. Oku kungasongwa ukuze kungangeni ndawo xa ingasetyenziswa.
Iibhentshi zokuhlambela eziphathwayo zizinto onokuhamba ngokulula kuzo. Ungazifaka kwaye uzisuse ngokukhawuleza. Zihlala zenziwe ngeentlobo ezahlukeneyo zomthi (iTeak yeyona ithandwayo), kunye noqalo, iiplastiki kunye nesinyithi, okanye indibaniselwano.
Jonga le bhentshi yokusonga i-bamboo IAmazon
Uqalo yinto entsha ethandwayo esetyenziswa kwifenitshala yangaphandle. Esi sihlalo sokuhlambela senziwe nge-bamboo ply, ethi icwecwe amaphepha oqalo. I-Bamboo iyaziwa ngokuxhathisa kwayo kwemozulu, ke ukuyifumana imanzi ayisiyongxaki.
Jonga ibhentshi yeshawari yezonyango IAmazon
Usihlalo wezonyango uhlamba abantu abadala, abo banokwenzakala okanye ukuhamba kancinci. Uyilo lwemilenze emine lubonelela ngeqonga elizinzileyo lokuhlala kunye nokuzilungisa ngokwakho ebhafini okanye kwishawari. Isakhelo sealuminium sinceda ukukhusela ukubola kunye nesihlalo esigosogoso sinceda ukubonelela ngentuthuzelo eyongezelelweyo.
Mhlawumbi eyona bhentshi yesiko lesiqhelo yindawo yokuhlambela eyenziwe ngomthi ebisetyenziswa nasemva kweentsuku. Zilula, ziyafikeleleka kwaye zinokushukunyiswa ngokulula xa kufuneka njalo. Qinisekisa ukuba imilenze ineziphatho ezifanelekileyo ukuze ingatyibiliki phantsi!
Jonga ibhentshi yokuhlamba iinkuni e IAmazon
I-Teak yinto eyaziwayo kwifenitshala yangaphandle kunye nokuhonjiswa, ngenxa yokuxhathisa kwayo kwemozulu. I-teak ineoyile yendalo enceda ukugxotha amanzi, ukujija okanye ukuqhekeka. Lo mzekelo ubonakalisa iiyantlukwano ezahlukeneyo zeebhentshi zetayiti eqinileyo- isitulo sokuhlambela itiak, isitya sokuhlambela kunye nesitulo sokuhlambela. Isitulo sethafa sekona se-teak sifezekile ukuba unendawo encinci yokuhlamba, kodwa uyidinga loo ndawo yokuhlala kwindawo yokuhlambela.
Iingxowa zezipho zehotele zangaphandle kweendwendwe zedolophu
Moen DN7110 Ukhathalelo Lwasekhaya Udonga Onyuswe T… Iidola ezingama-336.08Iidola ezingama-336.08 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-511 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Iseti yeethayile eziCwebezelayo eziMhlophe ezi-12 ze-A… $ 13.99 ngexabiso umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-142 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-4x4 White Glossy Gqiba iTera yodongwe yangaphantsi ... $ 59.99 umthengisi ogqibelele (36) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Iququzelele Yonke i-1750W-1 inyuswe i-chrome sh… $ 49.09 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-1587 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
ukuphakama kwephepha langasese
yimalini amaqebengwana omtshato
isimemo somtshato esinegama endaweni yezipho
Iindleko eziphakathi zomntu othatha umtshato
Izimvo zomtshato weendwendwe zomtshato waselwandle